Goobaha Ugu Fiican ee Lagu Soo Degsado Buugaag Bilaash ah | Wararka Gadget
Paco L Gutierrez | | Akhristayaasha
Aafada ma nasato, laakiin ma burburi karno. Tan darteed waxaan u adeegsan karnaa hiwaayado badan oo aan ka dhigi karnaa xabsigan wax faa'iido leh, midkoodna si aan u dhammeyno taxanahan aan sugeynay, kuwa fiidiyowga ah ee aan bilaabin ama nafteena ku hodminno qaar ka mid ah buugaagta casriga ah ee casriga ah. Marna maahan waqti xun dhaqanka tanna waxaan u haysannaa fursado badan oo bilaash ah.
Haddii aan leenahay a Kiniin ama Taleefan casriga ah Iyada oo shaashad ballaaran oo shaashad ah, waxaan ka faa'iideysan karnaa bogag badan oo kala duwan oo internetka ah si aan u soo dejino kumanaan cinwaanno bilaash ah. Waa faa'iido weyn marka la fiiriyo iibsashada buug jireed xilligan inay tahay mid aad u dhib badanXitaa si looga iibsado dukaanka internetka waxaa laga yaabaa inay jiraan dhibaatooyin kaydinta ama qaybinta. Tan awgeed waxaan ku siinaynaa adiga ikhtiyaarrada ugu fiican ee laga helo guriga iyo gebi ahaanba bilaash.
1 Xayeysiinta tifaftirka ee maxbuuska
1.4 Buugaagta Roca
1.5 Dabeecadda Errata
2 Siyaabo kale oo loogu heli karo buugaag bilaash iyo sharci ah
2.3 Aan aqrino
2.4 Buugaagta quudinta
Xayeysiinta tifaftirka ee maxbuuska
Qaar ka mid ah daabacayaasha ugu awoodda badan waxay bixiyaan noocyo cinwaanno bilaash ah si ay u muujiyaan midnimo dadka. Waa tilmaam wanaagsan in lagu horumariyo dhaqanka xilliyada adag ee sidan oo kale ah.
Daabacahan weyn wuxuu bixiyaa a xirmo 11 buug oo loogu talagalay dhiirrigelintan. Tan ka sokow, waxaad ka heli doontaa a kalandarka halkaas oo aan si dhow ula socon karno waxqabadyo akhris oo dheeri ah oo la heli karo. Sidan oo kale, waxaan ku sii jirnaa firfircoon si dhow ula socoshada isbeddelka dalabka. Halkan waan heli karnaa
Halkan ayaan ku kulannaa 5 waxay ka shaqeeyaan qorayaasha la siiyay Abaalmarinta Herralde, si aad ugala soo baxdo soo-dejintaada barnaamijyada aad digital ahaan ugu qaybiso buugaagtaada, sida iBooks, Amazon, Google Play iyo qaar kale. Halkan waan heli karnaa
In ka badan labaatan shaqo oo suugaanta dhalinyarada ah Waxay qayb ka yihiin dalabyada ballaadhan ee uu daabacahani si buuxda oo bilaash ah u bixiyo. Dhamaan dhalinyaradaas doonaya inay xoogaa ka jaraan YouTube iyo Netflix. Ma sahlana in la helo xiriiriyeyaasha marin u helka, waxaad ku heli kartaa adiga oo galaya qaybta "khayraadka kale" qaybta "khayraadka", waxaa laga heli karaa tabta cinwaan kasta. Halkan waan heli karnaa
Daabacahan ayaa ku deeqaya kiiskan 14 cinwaan oo noocyo kala duwan oo suugaaneed ahKuwani waa cinwaano aad muhiim u ah waxaana laga heli doonaa ilaa 7 dhufto oo kala duwan. Halkan waan heli karnaa
Qiyaastii labaatan ayaa ah buugaagta ka kooban xulashadan waxaa lagu siiyaa bilaash si loogu soo dejiyo qaab PDF ah bogga rasmiga ah ee daabacaha. Laga soo bilaabo sheekooyinka dystopian ama qoraallada si loo fududeeyo fikirka muhiimka ah iyo xitaa qaar cinwaanada carruurta waa qayb ka mid ah qaybaha loo heli karo dhiirrigelintan. Halkan waan heli karnaa
Siyaabo kale oo loogu heli karo buugaag bilaash iyo sharci ah
Halkan waxaan ku faahfaahin doonnaa barmaamijyada ugu muhiimsan ee loo qaybiyo suugaanta, marka lagu daro helitaanka bixinta lacag la'aanta ah, waxay hayaan buuggaag aad u tiro badan oo ikhtiyaarro bilaash ah. In kastoo tani aysan ahayn dalacsiin xaaladda jirta awgeed, waa wax aan heli karno sanadka oo dhan.
La dukaanka heer sare ee duugga ah ee suugaanta dijitaalka ah, halkaas oo aan ka heli karno dalab weyn oo bilaash ah eBooks Kindle. Noocyada suugaanta ee afkeenna, sida shaqooyinka ay qabtaan Cervantes, Lorca ama Miguel Hernandez… Iwm. Waxaan sidoo kale heli karnaa shaqooyinka shisheeye oo la turjumay luqadeena, in kastoo hadaad taqaano dhowr luuqad sidoo kale aad kala soo bixi karto luqado kale. Halkan waan heli karnaa
Amazon, marka lagu daro haysashada weyn ee buugaagta bilaashka ah, waxay bixisaa xitaa cinwaano badan haddii aad tahay macaamiisha Amazon Prime, sidaa darteed xitaa waxaad yeelan doontaa qiimo dhimis aad ku iibsato Kindle Paperwhite waxaan horey u sameynay dib u eegis Halkan, inaad ku raaxeysato dhammaan buugaagtaada dijitaalka ah.
Websaydhkan waxaan ka heli karnaa wax ka badan 18.000 buug oo Isbaanish ah si aan ugala tashano internetka. Waxeey heesataa buugaag ku qoran luqado kala duwan, wadar ahaan 1,4 milyan buugaag. Waxay joojiyeen howsha sugitaanka amaahda inta lagu jiro karantiillada. Waan awoodnaa si fudud u soo dejiso waxyaabo badan, labadaba PDF sida ePUB, cinwaanadaas kuwa aadka kuu soo jiita, waa mid ka mid ah ilaha ugu ballaaran ee laga helo dhaqanka qoran ee aan heli karno. Halkan waan heli karnaa
Xaaladdan oo kale waa adeeg lacag bixin ah oo ka hooseeya rukunka bil kasta, in kasta oo aan heli karno a 30-maalmood oo tijaabo bilaash ah. Waan heli karnaa in kabadan 1000 cinwaan oo qoran iyo waliba buugaag maqal ah, wax aad u raaxo leh haddii aynaan rabin inaan indhaheenna ciriirino habeenkii. Kuwani waxaa lagu uruuriyaa inta udhaxeysa iibiyaasha ugu fiican, kuwa fasalada iyo sheekooyinka cusub. Waxaan leenahay codsi labadaba macruufka sida Android. Waxaan leenahay Halkan marin u helka websaydhkaaga.
Halkan waxaan ka heli karnaa kumanaan aqoonyahanno ah oo si xor ah u dhex wareega oo mahad leh qaybta dadweynaha, waxaan haynaa cinwaano kala duwan. Waxay u qaybsan yihiin qaybo. Waxay u qaybsan yihiin kuwa khayaaliga ah ama aan ka tirsanayn, iyagoo leh cinwaanada naxdinta leh ee caawinta iyo waxbarashada. Halkan waan heli karnaa
Adeeg kale oo lacag bixin ah oo loogu talagalay qaybinta buugaagta, joornaalada iyo hagayaasha safarka. Si kastaba ha noqotee, waxay leedahay a 30-maalmood oo tijaabo bilaash ah. U hayaa codsi macruufka y Android markaa waxay aad noogu fududeyn doontaa inaan ka helno aaladaha leh nidaamyadan hawlgalka. Waxaan sidoo kale marin ka heli doonnaa kiniinnada, akhristayaasha elektarooniga ah iyo kombiyuutarada. Halkan waxaan ka heli karnaa shabakadaada.
Markan waa adeeg aan ka helno suuq qorayaal madax banaan kuwaas oo tafatir cinwaankooda. Waxay leedahay qayb gaar ah oo dhammaan kuwa leh ikhtiyaarka soo dejinta bilaashka ah la isugu geeyo qaab dijitaal ah. Maaddaama ku dhowaad dhammaantood loo qaybiyay qaybo, kuwaas oo aan ka heli karno taariikh nololeedka, aadanaha iyo taariikhda, ilaa gabay ama cilmi nafsi. Halkan waxaan ka heli karnaa shabakadaada.
Akhriso, wax baro oo koraan waa hal-ku-dhiggooda. Waxay u qaybsan tahay 3 qaybood, «buugaagta lagula taliyay "," buugaagta iyo qoraallada ku qoran PDF "iyo" ilaha lagu hagaajinayo akhriskaaga ", mawduucyada xiisaha leh xulashada buugaagta, waxay bixiyaan buugaag iyo qalabyo ruqsad haysta oo bilaash ah Creative Commons (Waa urur aan faa'iido doon ahayn oo loogu tala galay kor u qaadida marin u helka iyo isdhaafsiga dhaqanka) kuwaas oo laga heli karo internetka. Halkan waxaan ka heli karnaa shabakadaada.
Waxaan kugula talineynaa inaad isticmaasho buugaagta elektarooniga ah ee aan isticmaalin isha iftiinka buluuga ah Iftiiminta dhabarka haddii aan rabno akhriska habeenka, maxaa yeelay tani waxay noo horseedi kartaa culeys xagga indhaha ah iyo hurdo la'aan Haddii aynaan haysan qalab noocan ah waxaan dooran karnaa inaan isticmaalno miiraha iftiinka buluuga ama qaabka wax aqrinta in hadda la keeno ku dhowaad dhammaan qalabka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Akhristayaasha » Goobaha ugu fiican ee laga soo dejisan karo buugaag bilaash ah